USA oo shaki gelisay in la dilay dagaalyahanadii al-shabaab ee weeraray xaruunta Westgate – Radio Daljir
Diseembar 11, 2013 3:44 b 0
New York, December 11, 2013 – Ciidamada booliska ee magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa ka hadlay weerarkii Westgate ee September lagu qaaday Nairobi, waxay sheegeen inay baxsadeen ragii weerarka qaaday oo ilaa haatan aan la xaqiijin halka ay ku dambeeyeen.
?Waxay u badan tahay in ay baxsadeen afartii ruux ee qaaday weerarkii Westgate.? War-bixinta booliska New York ayaa sidaas lagu yiri, waxaana taas ay beeninaysaa war horay uga soo baxay Kenya oo sheegayey in iska hor-imaad ka dhacay xaruunta lagu dilay dadkii weerarka qaaday.
Booliska New York oo xiganaya macluumaad sirdoon ayaa sheegay in habacsanaan ay ka timid ciidanka Kenya, taas oo cadaynaysa in aan la dilin ama la qaban ragii weerarka westgate fuliyey.
Kooxda Al-shabaab ayaa horay u horay sheegay inaysan baxsan ragii weerarka qaaday. qoraal ay Al-shabaab dhigtay internetka ayaa lagu yiri ??ragii weeraray Westgate waxay ahaayeen naftood hurayaal dhamaantood ku dhintay weerarka.?
Booliska New York waxay shaki geliyeen warka Al-shabaab iyo kan ciidanka Kenya intaba
Interpol ayaa xilligan Kenya ka caawinaysa baaritaano ku socda afar ruux oo maydkooda laga soo saaray dhismaha Westgate kadib markii uu dhamaaday howl-galka, afarta ruux lama xaqijin ilaa xilligan dhab ahaanta dagaalyahanmada lagu tuhmay.